‘Ny anay koa vola aloha vao fahafahana’: Esoesoin’ireo mpamorona ny South Park ny NBA · Global Voices teny Malagasy
'tsapan-dry zalahy fa tsy afa-mivadika amin'ny idealiny ry zalahy'
Voadika ny 12 Oktobra 2019 5:38 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Español, русский, Français, English
Randy mijoro ao amin'ny fitsarana shinoa. Pikantsary avy amin'ny South Park.
Namoaka fialan-tsiny naneso an'i Shina ireo mpamokatra sarimiaina Amerikana South Park taorian'ny nanesoran'ireo mpanivana ao Beijing izay rehetra mety ho dia navelan'ilay sarimiaina tamin'ny servisy rehetra fandefasana lahatsary sy ny sehatra media sosialy tao Shina tanibe. Maneso ny Fikambanana Nasionaly Basketball (NBA) ny fialan-tsiny, nivoaka ny 7 Oktobra noho izy nitondra ny “sivana Sinoa tao an-tranontsika sy tao am-pontsika”. Narahana resabe antserasera manerantany nateraky ny sioka nalefan'i Daryl Morey, mpitantana ny Houston Rockets, ekipa milalao ao amin'ny NBA, ary manohana ireo mpanao fihetsiketsehana ao Hong Kong izay mitaky fahalalahana ara-politika bebe kokoa sy manohitra ny politikan'i Beijing amin'izao fotoana izao, ilay fanambarana mahatsikaiky. .
Vakio ny fitantarana manokana ataon'ny Global Voices: Ny vahoakan'i Hong Kong mifanandrina amin'ny volavolan-dalàna momba ny fampodiana ao Shina
Mihaona amin'ireo mpilalao amin'ny Disney ao amin'ny fonja Shinoa
Ny nahatonga ny hetsiky ny sivana shinoa no andiany farany tamin'ilay tantara mitohy, antsoina hoe “Band in China”. Mampiseho mpandray anjara fototra iray, Randy manao fitsidihana ara-pihariana ao Shina ary nitsidika ny fonja izany, ka nifanena tamin'ireo mpilalao ao amin'ny Disney, anisan'izany i Winnie Orsa sy Piglet. Navoaka tamin'ny 2 Oktobra, andro iray taorian'ny faha-70 taonan'ny fanorenana ny Repoblikam-bahoaka Entin'i Shina ny andian-tantara maneso an'ny Hollywood noho ny fanaony amin'ny fanivanan-tena ao Shina. Nanaitra ny sasany tamin'ireo mpankafy sarimiaina ao anatiny sy ivelan'i Shina ilay andian-tantara noho ny fampisehoana herisetra, izay mahazatra amin'ny andian-tantara hatramin'ny niandohany tamin'ny taona 1997.
Volamena madio ny tantara mitohy “Band in China” novokarin'ny South Park momba ireo orinasa fanivanan-tena any Shina. Jereo eto: https://t.co/Ts4dz0vKkH
Fampitandremana: Ahitana fampisehoana herisetra mahery vaika ny fandaharana – manomboka amin'ny fiaikena noterena nataon'i Randy, dadan'i Stan, namono an'i Winnie the Pooh. Ahitana death metal ihany koa.
Tonga hatramin'ny fanakianana ny fomba fanao “fiaikena noterena” any Shina ny tantara tamin'ny fanerena an'i Randy mba hiaiky fa namono an'i Winnie ilay Orsa, sary-sy-soratra (meme) antserasera an'ny filoha shinoa Xi Jinping:
Mitondra ny lohateny hoe “Band In China” ny andian-tantara vaovaon'ny south Park, izay mifantoka amin'ny sivana hentitra atao amin'ny haino aman-jery ao Shina
Mandritra ny andian-tantara, mangataka amin'ny andian-jiolahy i Shina mba hamono an'i Winnie ilay Orsa. Amin'ny tena fiainana, voaràra ao Shina ny Winnie ilay Orsa noho ireo sary sy soratra mampitaha azy amin'ny filohan'i Shina
Mazava fa efa nampoizin'ireo mpamorona ny sarimiaina Trey Parker sy Matt Stone ny fandraràna ny aterineto Shinoa. Raha ny marina, satria toa tsy dia mazava ny hafatra momba ny zava-niainan'i Randy tany Shina, nataon'ny South Park ho hita maimaim-poana ny andian-tantara “Band in China” tamin'ny 3 Oktobra:
Niverina tany South Park i Kyle ary nanome hevitra tsara ho an'i Stan, saingy takatry ry zalahy a tsy azony atao ny mamadika ny idealiny. Jereo MAIMAIM-POANA ny andian-tantara vaovao rehetra “Band in China”
Tamin'ny 7 Oktobra, taorian'ny fandraràn'i Shina sy ny famoahana ny fanambarana fialan-tsiny nataon'ny NBA tamin'i Shina noho ny siokan'ny mpitantana ny Houston Rockets, Daryl Morey momba an'i Hong Kong, nandefa “fanambarana ofisialy” tao amin'ny Twitter maneso ny NBA ny South Park:
Tahaka ny NBA, mandray ny sivana shinoa eto an-tanindrazantsika sy ao ampontsika isika. Tianay kokoa mihoatra noho ny fahafahana sy ny demokrasia ny vola. Tsy mitovy amin'i Winnie the Pooh mihitsy i Xi. Jereo ny andian-tantaranay faha-300 amin'ny Alarobia amin'ny 10 ora! Ho ela velona anie ny Antoko Komonista Lehibe ao Shina! Hiroborobo anie ny fijinjana sorghum amin'ity fararano ity! Tsara ve izahay izao (ry) Shina?
Miondrika amin'i Shina ny NBA
Nanomboka tamin'ny 5 Oktobra izany rehetra izany raha namoaka sary tao amin'ny Twitter momba ny tabataban'ny diaben'ny fihetsiketsehana tao Hong Kong: “Miady ho an'ny fahalalahana, mijoro miaraka amin'i Hong Kong” i Daryl Morel. Na dia efa nofafan'i Daryl aza izany sioka izany taty aoriana, nalain'ny fampahalalam-baovao Shinoa tahaka ny Global Times sy People’s Daily ny fihetsiny tamin'ny media sosialy ary nivezivezy tao amin'ny Weibo. Samy miasa toy ny mpitondra tenin'ny Antoko Komonista Shinoa ireo fampahalalam-baovao roa ireo ary nampiseho ilay fihetsika ho toy ny fanohanana ny “hetsika fanoherana”. Araka ny efa nampoizina, dia nisy ny fanentanana an-tserasera mitaky fialan-tsiny ampahibemaso nokarakaraina tany Shina.
Ho setrin'ny korontana Shinoa, nanazava i Morey fa mampiseho fotsiny ny fomba fijeriny ny siokany:
2 / Nankasitraka hatrany ny fanohanana lehibe nomen'ireo Shinoa mpankafy sy mpanohana anay aho ary manantena aho fa hahafantatra ireo izay tezitra fa tsy fikasako velively ny hanompa na tsy hifankahazo amin'izy ireo. Ahy manokana ireo sioka ireo ary tsy misolo tena ny Rockets na ny NBA.
Namoaka fanambarana ofisialy ihany koa ny NBA amin'ny ezaka hamonoana ny afo any Shina:
Fanambarana voalohany avy amin'ny NBA:
Fantaro fa ny fomba fijerin'i [Morey] dia nanafintohina mafy ny maro ao Shina, izay mampalahelo.
Ny dikanteny nalefan'izany tao amin'ny media sosialy Shinoa:
Tena diso fanantenana tamin'ny fanambarana tsy mendrika nataon'i Morey. Tsy isalasalana fa nandratra mafy ny fihetseham-pon'ireo mpankafy CN izy
Na izany aza, nisy fiantraikany tamin'ireo mpankafy NBA any Etazonia ilay fanambarana. Kandidà filoham-pirenena Amerikana, Beto O'Rourke, nihevitra izany ho “mahamenatra” raha niampanga ny NBA ho “namitaka” an'i Morey mba hiarovana ny fidiran'ny tsenan'ny NBA ao Shina kosa ny Senatera Repoblikana Florida Marco Rubio:
Lehibe noho ny @NBA fotsiny izany. Momba ny fitomboan'ny fahafahan'i #China hametra ny fahalalahana miteny eto Etazonia izany
Efa maniva-tena ireo tambanjotra fahitalavitra, zotram-piaramanidina, ny trano fandraisam-bahiny, ny mpivarotra atsinjarany & Hollywood .
Ankehitriny atahorana ho very asa ny olon-tsotra raha manafintohina an'i Shina izy ireo
Amin'ny lafiny iray, mihevitra i Shina fa tsy ampy ny fialan-tsinin'ny NBA, noho izany dia nesorina tamin'ny tranonkalam-barotra antserasera Shinoa; toy ny Taobao, Tian Mall ary Jingdong ny entana marika Rockets rehetra. Nanambara ny fampiatoana ny fandaharana NBA ihany koa ny fampahalalam-baovao Shinoa, anisan'izany ny China Central Television sy ilay goavan'ny aterineto Tencent, taorian'ny siokan'i Morey.
Raha nanazava tamin'i Shina ireo mpamorona ao amin'ny South Park fa tsy hamadika ny idealiny izy ireo, dia nanapa-kevitra ny hanaiky ny rafitra ideolojika napetrak'i Shina tamin'izao tontolo izao ny NBA – araka ny nasehon'ny taratasy misokatra ho an'ireo mpankafy NBA avy amin'ny tompon'ny Brooklyn Nets Joseph Tsai, izay miombon-kevitra amin'i Beijing manome anarana ny fihetsiketsehana any Hong Kong amin'izao fotoana izao ho fihetsiketsehana fisintahana tsy ara-dalàna, ary nandrisika ireo mpankafy NBA mba hahalala ny tantaran'i Shina.
Betsaka ny orinasa marika vahiny niala tsiny vao haingana tamin'i Shina noho ny fihenjanana amin'i Hong Kong. Satria miha-lalina ny fifandirana, vondron'orinasa manerantany bebe kokoa no tsy maintsy terena hanao safidy eo amin'ny fiarovana ny soatoaviny na hanompo ny karazana soatoavin'i Shina. Ao amin'ity lalao ity, dia tsy misy ny vintana faharoa: raha nanandrana nanaraka ny làlana antonony ny NBA, dia niafara tamin'ny felaka azo avy amin'ny roa tonta.